Imifanekiso ye-Run-DMC ngoncedo lweFlickr http://www.flickr.com/photos/johannahobbs/
Nditsalele umnxeba njengesixhobo semfundo yobunene, kodwa ndiyakholelwa ngokuqinisekileyo ukuba umbono wehlabathi kufuneka uxelelwe yimithombo emininzi kunye namava kangangoko. Ukufunda incwadi yamva nje yingcali kwicandelo lakho kulungile. Ukutya uninzi lwezithuba zebhlog kunye namanqaku eendaba kangangoko unakho malunga nomzi mveliso wakho kuluncedo. Kuyacetyiswa ukuba uzimase iinkomfa kwaye uhlale kwiingcaciso-ntetho zokuqhubela phambili nomsebenzi wakho.
Kodwa kubalulekile ukuba ujonge ngaphandle kwe-orbit yesiqhelo ukunceda ukwenza umbono wakho. Kukho umhlaba omkhulu apha phandle, kwaye ukuba awuyisebenzisi kakuhle ngokupheleleyo uyaphoswa.
Ngaloo nto engqondweni, ndivumele ukuba ndibuyele kwiiKumkani zeLitye, ookhokho be-hip-hop, Sebenzisa i-DMC, kwaye bandifundise ntoni ngemidiya yoluntu.
Naphi na apho uya khona, nokuba uphi / ndithe uthetha ngale nto, kwaye uthetha ngayo… Uthetha xa uvukile, ndikuvile xa uthetha xa ulele / Ngaba kukho umntu owakhe wakuxelela, loo ntetho ayibizi ?
Inkqonkqo yeklasikhi ngokuchasene noTwitter ibisoloko ingathi "Andikhathali nokufunda malunga noko abantu banako ngesidlo sasemini." Ngelixa kucacile ukuba kukho into eluncedo ngakumbi kuTwitter nakwezinye iindlela zosasazo lwentlalo kunokubonisa nje imikhwa yokutya, kunokwenzeka ukuba wabelane kakhulu.
Kukho uphando oluninzi kunye ne-infographics ehamba kunye nokubonelela ubungqina benani elona liphezulu lezabelo kwimidiya yoluntu ngosuku. Ndiza kuthatha ubukrelekrele kwindawo yakho kwaye ndingacacisi ngakumbi kwinto efumaneka ngokulula.
Endaweni yoko ndincoma ukuqonda okulula kulo mbandela. Akukho mntu uthanda ukukhutshwa kwi-slash-spamm, nokuba bakhethe ukubhalisa kwizithuba zakho. Ubuninzi abuhambisi mgangatho, ngakumbi ukuba oko kuyabacaphukisa abalandeli bakho ukuya kuthi ga kwimfuduko.
Kuyinkohliso ukugubha isingqisho, ukugungqisa isingqisho esifanelekileyo ngexesha, kuyakhohlisa.
Enye yeenjongo eziphambili zokubandakanyeka kwimidiya yoluntu kukunyusa: ukukholisa abalandeli bakho kunye nabalandeli ukuba babe ngabameli begama lakho kunye nomyalezo ngokwabelana kwakhona nomxholo wakho. Aba balandeli bakwalandela ezinye iimveliso ezininzi, abadumileyo kunye nabahlobo babo. Usika njani kuyo yonke enye ingxolo kwaye ukhuthaze isenzo?
Enye indlela kukulungiselela amaxesha akho okuposa ukunceda umxholo wakho ubonakale. Akukho kunqongophala kwedatha ebonisa ukuba iintsuku ezithile kunye namaxesha angcono ngokuthumela umxholo ngenxa yoko kunokwenzeka ukuba ubonwe. Ngumbono olungileyo ukuthatha ithuba lale datha kwaye wenze konke okusemandleni ukukhupha umxholo wakho ngaphambili.
IHollis Crew (iCrush Groove 2)
Uneemvano-siphelo, imvano-zandi, imvano-zandi / Imvano-zandi ongazange wayiva ngaphambili / Ngoku ukuba uthi uvile iingoma zam, kuya kufuneka silwe / Isizathu sokuba ndenze nje isingqisho esiphakamileyo phezolo.
Njengoko uhlaziyo ngalunye lubenza babe nobukrelekrele, iinjini zokukhangela zikhangela umxholo ngakumbi nangakumbi ngendlela yabantu. Oku kuthetha ukuba, njengabafundi bakho, bakhetha umxholo wokuqala. Umxholo omtsha kwaye uhlala umtsha kunye nowakho (okanye uphawu lwegama lakho) umbono owahlukileyo ubalulekile ekufumaneni nasekugcineni oku kulandelayo.
Konke kulula ukukopela indlela yakho kumxholo omtsha ngokuphindaphinda okanye ukuphinda upapashe ukukhutshwa kweendaba okanye umxholo wokudibanisa. Kuya kufuneka uqiniseke ukuba upapasha umxholo onomdla, ofanelekileyo kwaye uxabisekile, kwaye ngaphezulu kwako konke okuyintsusa. Ngaphandle koko awunasindululo sexabiso sodwa, kwaye awuboneleli ngolwazi olutsha okanye ukuqonda. Yindlela ekhawulezayo eya kwidolophu yesiporho yemidiya yoluntu.
tags: blogkublogaqhinga lomxholoukuthengiswa kwedathaFacebookIqela le-hollisinkohlisoraprun dmcImidiya yokuncokolaTwitteruthetha kakhulu